Egbugbu iji cheta nna nwụrụ anwụ | Igbu egbugbu
Egbugbu iji cheta nna nwụrụ anwụ
Ndụ jupụtara na oge obi ụtọ na mwute. O nwere oge a na-eme mmemme ọmụmụ nke nwatakịrị ma ọ bụ agbamakwụkwọ na ndị ọzọ mgbe onye a hụrụ n’anya ga-asịrịrị ya. N'ihe banyere nna nwụnahụ ya, oge ahụ siri ike ma sie ike imeri. Njikọ nke ndị nne na nna na-adịkarị ike ma ọtụtụ mmadụ kpebiri igbu egbugbu iji nwee ike icheta ha n'oge ndụ ha niile.
Embossing na akpụkpọ nke a haziri na-echetara a nna Ọnwụ nwụrụ na-egosi ịhụnanya nke onye ahụ na nkekọ ga-adịgide ndụ ya niile. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ọmarịcha ụzọ icheta nna ma gosipụta ịhụnanya na-enweghị atụ n’ebe mmadụ nọ.
1 Egbugbu nke na-asọpụrụ nna nwụrụ anwụ
2 Mpaghara ahụ ị nwere ike igbu egbugbu
Egbugbu nke na-asọpụrụ nna nwụrụ anwụ
Enwere atụmatụ dịgasị iche iche ugbu a na ị nwere ike igbu egbugbu mgbe ị na-asọpụrụ nna gị nwụrụ anwụ. Echefula nkọwa ụfọdụ nke ga - enyere gị aka ikpebi:
Otutu ndi mmadu choro igbu egbugbu EKG iji cheta nna ha nwuru anwu. Igwe electrocardiogram na-egosikarị ịhụnanya, ndụ na olileanya. Ebe dị mma iji nweta egbugbu EKG nwere ike ịbụ nkwojiaka ma ọ bụ azụ nkwonkwo ụkwụ.
Echiche ọzọ magburu onwe ya nwere ike ịgụnye igbu egbugbu nke nna na-ejide aka nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ nwere ahịrịokwu m hụrụ gị n'anya. Ọ bụ egbugbu nke nnukwu akara na nke ahụ na-ezo aka n'ịhụnanya ebighi ebi n'ebe nna nwụrụ anwụ nọ. Ha bụ obere egbu egbu egbugbu na nke ojii zuru oke iji jide ya na mpaghara ahụ.
Onwere ndi ozo choro ichota eserese nna ha nwuru anwu na aha ya na ubochi omumu na onwu. N'okwu a, a haziri usoro a dabere na onyinyo ojii na oji iji mee ka egbugbu ahụ dị adị.
Ọzọ echiche bụ embody mkpịrịsị mkpịrịka RIP na akpụkpọ ahụ na-esote aha nna gị nwụrụ anwụ na otu mmụọ ozi nwere nku ghere oghe ma debe ha ụbọchị ọmụmụ na ọnwụ. Ọ bụ ụdị egbugbu ọzọ ejiri nnukwu akara na nkọwapụta nke ga - enyere gị aka icheta nna gị nwụrụ anwụ. Otu n'ime akụkụ kachasị dị na ahụ mgbe a bịara n'ụdị ụdị egbugbu a bụ azụ olu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ị na-egbu egbugbu, nke ahụ na-enyere aka icheta ụdị nna nwụrụ anwụ. Ọ dị mkpa na nhọrọ ahọpụtara ahọpụtara ga - enyere gị aka ịnwe oke ịhụnanya ị kwupụtara n’ebe nna gị nọ.
Mpaghara ahụ ị nwere ike igbu egbugbu
Ọ bụ ihe dị mma maka ụdị egbugbu a na-eme n'akụkụ ahụ. N’ụzọ dị otu a mmadụ ahụ ga - ahụ ya oge ọ bụla ọchọrọ ma nwee ike icheta onye dị mkpa nna ahụ n’oge niile. Akụkụ ahụ ndị a na-ejikarị eme ihe na nna nna nwụrụ anwụ na-abụkarị ogwe aka, ụkwụ, ụkwụ ma ọ bụ aka. Enwekwara ọtụtụ ndị họọrọ igbu egbugbu ahụ n’obi ha ma nwee mmetụta karịa maka nna ha.
Ọ dịghị mfe ma ọlị inwe ike ịnagide ọnwụ nke onye dị ka nne ma ọ bụ nna. Ọ bụ ihe mgbu na-esiri ike iji merie na ọtụtụ ndị kpebiri ijide na akpụkpọ ahụ ha site na igbu egbugbu mara mma na nke mmetụta uche. Ọ bụ ihe kwesịrị ịja mma maka nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị ịhọrọ ụdị ihe ọ bụla ma gosipụta ya na akpụkpọ ahụ maka ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ọfụma karịa, mgbe ha hụchara ihe na akpụkpọ ha, dị ka eserese ma ọ bụ ahịrịokwu, nke na-enyere aka icheta nna nke hapụrụ ụwa a na-anọghịzi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Egbugbu iji cheta nna nwụrụ anwụ
Egbu egbugbu nke nna nna m, echiche iji kwanyere gị ùgwù